Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Maninona no manidina Finnair amin'ny alàlan'i Helsinki amin'izao tontolo izao?
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao Mafana Singaporeana • Vaovao Mafana Espaniola • Vaovao Mafana Soeda • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Finnair dia nanambara ny sidina vaovao any Eropa, Azia ary Amerika Avaratra
Finnair dia nanambara fahita matetika sy sidina vaovao mankany Tokyo, Osaka, Seoul, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Stockholm, Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt, London, Paris, St. Petersburg , Krakow, Gdansk, Madrid, Malaga ary Barcelona.
Manohy manompo ireo toerana itodiana aziatika azony i Finnair, manidina isan'andro mankany Tokyo, Seoul ary Bangkok, ary manolotra hatetika isan-kerinandro mankany Singapore sy Hong Kong.
Finnair dia hanamafy ny serivisy amerikana avaratra ary hanompo any Chicago, làlana fahavaratra teo aloha, nandritra ny vanim-potoana ririnina.
Ny tamba-jotra Eoropeana an'i Finnair dia hitombo haingana ny refesina mandritra ny ririnina, miaraka amina serivisy indroa isan'andro amin'ireo tanàn-dehibe eropeana toa an'i Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin ary Frankfurt.
Rehefa mitombo hatrany ny anjaran'ny olona vita vaksiny tanteraka ary misokatra ny fiaraha-monina dia mitombo ny tsangantsangana amin'ny tsena marobe. Finnair dia mihaona ny fitomboan'ny tinady amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fanampiana matetika sy toeran-kaleha ao amin'ny tambajotrany any Eropa, Azia ary Amerika Avaratra amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina.
Manohy manompo ireo toerana itodiana aziatika azony i Finnair, manidina isan'andro mankany Tokyo, Seoul ary Bangkok, ary manolotra hatetika isan-kerinandro mankany Singapore sy Hong Kong. Ny serivisy Osna any Finnair dia miverina amin'ny volana oktobra, manitatra ny fisian'i Finnair miverina amin'ny tsena Japoney, miaraka amin'i Nagoya hiditra amin'ity portfolio zotra ity amin'ny volana feb. Finnair dia hanomboka hanompo ny Dubai fifandraisana amin'ny fiaramanidina malalaka.
Finnair dia hanamafy ny serivisy any Amerika Avaratra ary hanompo any Chicago, làlana fahavaratra teo aloha, nandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina. Finnair koa dia manompo an'i New York isan'andro avy any Helsinki ary miasa sidina telo isan-kerinandro mankany Miami sy Los Angeles. Ankoatry ny fanompoana an'i Amerika Avaratra avy ao amin'ny foiben'i Helsinki, dia hampiditra lalana mivantana mankany Los Angeles sy New York avy any Stockholm, Suède i Finnair. Finnair dia hampiditra lalana mivantana avy any Stockholm mankany Miami, Phuket ary Bangkok ihany koa, araka ny efa nambara teo aloha.
Ny tambajotra eropeana an'i Finnair dia hitombo haingana ny refesina mandritra ny ririnina, miaraka amina serivisy isan'andro avo roa heny amin'ireo tanàn-dehibe eropeana toa an'i Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin ary Frankfurt, ary matetika isaky ny hatetika London sy Paris. Finnair koa dia mampitombo ny refy mankany St. Petersburg hanohanana ny fivezivezena mankany amin'ny toeran'i Amerika Avaratra any Finnair.
Finnair koa dia manolotra hatetika marobe isaky ny renivohitra Scandinavian, ary i Finnair dia hampiditra an'i Krakow sy Gdansk amin'ny vanin-taona ririnina. Finnair dia hampitombo ny fahita any amin'ireo toerana fialan-tsasatra malaza any Espana, manompo any Malaga, Nosy Canary, Madrid ary Barcelona miaraka matetika matetika isan-kerinandro. Ary ny Finlanda Lapland dia manohy manintona ireo mpandeha ririnina ary Finnair dia manolotra fifandraisana efatra isan'andro amin'i Rovaniemi, Ivalo ary Kittilä, ary serivisy roa isan'andro mankany Kuusamo, miaraka amin'ireo fifandraisana malefaka avy any Helsinki.
"Faly izahay fa afaka manitatra ny sakany sy ny halalin'ny tamba-jotra aminay, ahafahan'ny fifandraisana tsara kokoa ho an'ny mpanjifa satria mbola mitohy ny dia", hoy i Ole Orvér, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra, Finnair.